Ogaden News Agency (ONA) – 22 Dagaal oo Lagu Qaaday Ciidanka Gumaysiga Itoobiya ayaa Khasaare laxaad leh loogu Gaystay Ciidanka Wayaanaha
22 Dagaal oo Lagu Qaaday Ciidanka Gumaysiga Itoobiya ayaa Khasaare laxaad leh loogu Gaystay Ciidanka Wayaanaha
Wararka naga soogadhaya wadanka Ogadenia gaar ahaan Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaallo aad ubadan oo kor udhaafaya 22 dagaal oo ciidanka gumaysiga Itoobiya lagu wiiqay dagaaladii oogu dambeeyay waxay udhaceen sidan soosocota.
2/8/13 Kalaalka oo dudumacadka katirsan iyo Xeromaygaag oo dagmada Fiiq katirsan dagaalo kakala dhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 15 askari halka 17 kalana lagaga dhaawacay.
2/8/13 Duudlibaax oo Dagmada Sagag katirsan weerar ay CWXO kuqaadeen ciidamo uu gumaysigu leeyahay dhibaataynta dadka halkaas ujoogay waxaana ciidanka cadawga lagaga dilay 6 askari 8 kalana waa lagaga dhaawacay.
10/8/13 Balanbaalka oo Galaalshe katirsan iyo Yaxoob oo Sagag katirsan iyo Quruuraxle oo iyo Karinka waata oo Dagmada Xamaro kawada tirsan dagaalo kadhacay waxaa ciidamada wayaana lagaga dilay in kabadan 7 askari 9 kalana waa lagadhaawacay.
13/8/13 Karincagaag oo dagmada dhagaxbuur ee xarunta Gobolka Jarar katirsan kamiin ay CWXO waxay Kugubeen hal baabuur oo isaga iyo wixii saaraaba isla basbeeleen.
15/8/13 Yaxoob oo Fiiq katirsan dagaal kadhacay waxaa xiidanka cadawga lagaga dilay 3 askari 4 kalana waa lagadhaawacay.
16/8/13 Mareexaan oo Fiiq katirsan waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 7 askari 3 kalana waa laga dhaawacay.
17/8/13 Tulli oo Dhagaxbuur katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
18/8/13 Taraabista iyo Baldhoola oo Fiiq kawada tirsan dagaalo kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 12 askari 15 kalana waa laga dhaawacay.
18/8/13 Suryoxagar oo Fiiq katirsan kamiin ay CWXO kaxidheen waxay kudileen inta lahuno 34 askari tiro kalana way kudhaawaceen sidoo kale waxay kugubeen 2 baabuur oo kuwa cadawga ah.
19/8/13 Dhabanadi oo Xamaro katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 6 askari 7 kalana waa laga dhaawacay sidoo kale waxaa lagaga furtay hub iyo saanad badan.
20/8/13 Suryoxagar iyo Dhabarsarmaan oo Fiiq kawada tirsan dagaalo kakala dhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagaga dilay 10 askari 1 baabuurna waa lagaga gubay.
21/8/13 Gaalotuban oo Xamaro katirsan waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 3 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
22/8/13 Candhofidiye oo Xamaro katirsan iyo Caado oo gobolka doollo ah waxaa ciidamada wayaanaha lagaga dilay 9 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay sidoo kale waxaa dagaalkaas lagaga furtay inkabadan 60 baag iyo qalab kale.
25/8/13 Duudlibaax oo Sagag katirsan waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 9 askari 6 kalana waa lagaga dhaawacay.